Juventus oo kooxaha Tottenham iyo Man United kula tartamaysa laacib ka dheela Premier League… (Waa kee?) – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester United iyo Liverpool ee tartanka FA CUP oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Elche iyo Barcelona ee horyaalka La Lig oo la shaaciyey
Chelsea oo guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Luton Town oo marti ugu aheyd garoonka Stamford Bridge… +SAWIRRO:
Juventus oo garoonkeeda Allianz saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Bologna… +SAWIRRO
Safafka rasmiga ah ee ay garoonka ku soo geli doonaan kulanka FA Cup-ka Kooxaha Chelsea iyo Luton Town oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Serie A ee Kooxda Juventus iyo Bologna oo la shaaciyey… (Matthijs de Ligt oo…)
Ole Gunnar Solskjær oo qiray in Donny van de Beek uusan ku faraxsanayn garoonka Old Trafford
“Guusha aan ka gaarnay Alaves waxay soo celisay Kalsoonida.” – Karim Benzema
Juventus oo kooxaha Tottenham iyo Man United kula tartamaysa laacib ka dheela Premier League… (Waa kee?)
Haaruun April 23, 2019
(Turin) 23 Abriil 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kula tartamaysa Tottenham Hotspur iyo Manchester United mid ka mid ah xiddigaha ka dheela horyaalka English Premier League.
Kooxda ku guuleysatay horyaalka Serie A-da Talyaaniga ee Juventus ayaa la sheegayaa inay doonaysao inay 40 milyan oo gini kula soo wareegto xiddiga shidan ee naadiga Fulham, Ryan Sessegnon.
18-sano jirkaan ayaa ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee qandaraaskiisa, waxaana Cottagers la sheegayaa inay doonayso inay lacago kaash ah ku iibsato inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee soo aaddan.
Tottenham Hotspur ayaa aad u doonaysay saxiixa laacibkan Sessegnon inka badan 18-kii bilood ee la soo dhaafay, halka kooxda Manchester United la rumeysan yahay inay xiiseynayso inay soo xero geliso xiddigan.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in Juventus magacyada ay suuqa kala iibsiga ka doonayso ku darsatay da’yarkan, waxaana ay rabtaa inay ku garaacdo saxiixiisa kooxda Spurs iyo Man Utd, maadaama ay isku diyaarinayso inay xilli ciyaareedka soo socda ka qeyb-galka tartanka Champions League.
Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii Chelsea barbaraha la dhaafi weysay kooxda Burnley
Sergio Busquets oo shaaciyey horyaalka uu ku biiri doono marka uu ka tago kooxda Barcelona